I-Sunnyside Cottage - I-Airbnb
Crossgar, Northern Ireland, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Doreen
U-Doreen uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Indlwana yase-Sunnyside iyibhodi lezivakashi lase-Northern Ireland elibhaliswe ngezinkanyezi ezingu-4 indlwana enamakamelo okulala angu-3 enkabeni ye-County Down, uhambo olufushane lwemizuzu engu-10 ukusuka e-Crossgar, e-Ballynahinch nase-Downpatrick.
I-Sunnyside Cottage isendaweni enhle kakhulu yokuvakashela Izintaba zase-Mourne, e-Strangford Lough nase-Game of Thrones.
Indlwana yalungiswa yaba yindinganiso ephakeme ngo-2008 futhi yahlelwa kabusha ekuqaleni kuka-2018 ukuze inikeze indawo yokuhlala ethokomele nenethezekile ukuze uthole indawo yokuhlala ekahle kakhulu.
Ukushisisa indlu yonke, faka indawo yomlilo ngesitofu sezinkuni, i-TV/i-DVD player, i-rediyo/i-cd player, i-cooker/i-microwave, umshini wokugeza izitsha/i-umble dryer, ifriji/i-freezer. Izinkuni ziyatholakala ngezindleko ezengeziwe.
Amakamelo angaphansi kwendlu aqukethe ikamelo elilala abantu ababili elinomabonakude negumbi elilala abantu ababili elinendlu eyakhiwe ngamapulangwe. Ngaphansi kunekamelo lezinsiza, i-w.c, igumbi lokudlela lasekhishini lokupheka nokudlela. Kukhona usayizi omuhle wegumbi lokuphumula lomndeni elinekamelo lemidlalo elihambisanayo, elinetafula le-pool kanye nebhodi lama-darts kanye nekamelo elilodwa phansi elinegumbi lokugezela.
Indlwana, isihlalo esiphakeme kanye namasango ezitebhisi kuyatholakala uma kucelwa. Sicela uphawule ukuthi ilineni yombhede ayinikezelwe indlwana. Shaver point kuwo wonke amagumbi. Umshini wokomisa izinwele ekamelweni ngalinye. Kulungele izingane, ngaphandle kwe-patio evalekile ngefenisha yengadi nendawo yokosa, indawo yokupaka enhle nephakethe lokwamukela elinikeziwe. Akukho ukubhema ngaphakathi kwendlwana. I-WiFi yamahhala iyatholakala.
I-Sunnyside Cottage isendaweni yasemaphandleni, kodwa inokufinyelela okulula ezitolo, imininingwane yezivakashi, ihhovisi lokuposa, indawo yokudlela kanye nezinkantini, ukudoba, igalofu, ibhishi eliluhlaza okwesibhakabhaka e-Tyrella, izikhungo zokuzijabulisa, indawo yokubhukuda, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngomkhumbi kanye nemidlalo yamanzi, ukugibela amahhashi (i-Castleward ne-Rowallane National trust).
I-Game of Thromes izindawo zokuthwebula izithombe, i-Down County Museum kanye ne-steam Rail, i-Quoile Countryside center ne-Delamont Country Park, i-St Patricks Heritage center kanye nethuna konke kuseduze. Itholakala kahle, i-Sunnyside Cottage inokufinyelela okuhle kakhulu kunethiwekhi yomgwaqo enkulu yokuvakashela i-Belfast, i-Lisburn noma yonke i-Northern Ireland.
Okuningi okudingwa yizivakashi
Hlola ezinye izinketho ezise- Crossgar namaphethelo